Ny vehivavy breziliana avy amin'ny matriarchal ponenana mitady lehilahy Brezila-Online - news-Brésil
Vehivavy avy any amin’ny tanàna Breziliana ny Noiva manao Cordeiro nanolo-kevitra fa ny olona iray avy manerana izao tontolo izao mba mifindra ao aminy. Ity tanàna kely no fantatra ny zava-misy fa mipetraka any amin’ny ankapobeny ny vehivavy mponina rehetra — olona bebe kokoa taona roa-polo amby dimy amby telo-polo taona. Mponina Noiva manao Cordeiro nanapa-kevitra ny tsy hiandry ny fanomezam-pahasoavan hanjo, sy ny fikarohana ho an’ny bridegrooms. Ny faniriana hanambady izy ireo dia nilaza ny asa fanaovan-gazety sy amin’ny tanàna ny amin’ny pejy Facebook, raha nanindry mafy izay mahaliana azy ireo hany bachelors izay tsy mampaninona matriarchal fomba fiainana.
Ny vehivavy sasany Noiva manao Cordeiro manana ny zanany sy ny vadiny, nefa dia miasa ivelan’ny tanàna, ary indraindray ihany tonga an-trano. Raha mbola tokan-tena ny ankizivavy dia voarara hanambady ny zanaky ny manambady vehivavy, toy ny taranak ny fianakaviana maro efa ela mifandray fifandraisana toy izany. Ny asa fanaovan-gazety ankizivavy Noiva manao Cordeiro nilaza izy ireo fa efa nanoroka, ary tsy momba ny nofy, dia ho raiki-pitia sy ny hanambady. Ny antso tokana vehivavy Breziliana efa namaly ny lehilahy avy any Brezila, India, Ejipta, Shina, ETAZONIA ary firenena hafa maro.
Breziliana tsy maika amin’ny Noiva manao Cordeiro
Noiva manao Cordeiro mandika avy amin’ny anarana ho»ampakarina Cordeiro». Mifototra vehivavy ponenana tao Maria Senorina de Lima taorian’ny hamonoana ny vadiny, izy dia voatery hiala ny fianakaviana. Ho an’ny fanoloran-tena ny hanao asa izy dia excommunicated avy amin’ny Fiangonana sy namadika azy karazana voaozona izy amin’ny taranaka fahadimy
← Maimaim-poana Niaraka tamin'ny olona tany Brezila Niaraka
I brezila - vavahadin-tserasera Breziliana →